Xog kasoo baxday kulankii albaabada u xirnaa oo ay caawa yeesheen Farmaajo iyo Shariif ? - Caasimada Online
Home Warar Xog kasoo baxday kulankii albaabada u xirnaa oo ay caawa yeesheen Farmaajo...
Xog kasoo baxday kulankii albaabada u xirnaa oo ay caawa yeesheen Farmaajo iyo Shariif ?
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulan xasaasi ah ayaa caawa Hotel Jaziira ee magaalada muqdisho ku dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sh. Shariif Axmed iyo Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Kulankaan oo ahaa mid uu albaabada ku xirnaa oo weliba labada madaxweyne kaliya qol xirteen ayaa la sheegay in madaxweynaha uga gol lahaa inuu Shiikh Shariif kala tashto cidda ku haboon Ra’isulwasaaraha
Sida ay sheegayaan dadka ku dhaw dhaw Farmaajo, madaxweynaha ayaa shalay kulan kale oo hoose albaabadana u xirnaa la yeeshay isla Shiikh Shariif Sh. Axmed taasoo caddeyn u ah inuu soo hagaagay xiriirka labadaan shaqsi waana kulankii labaad oo xiriir ah muddo laba maalin.
Madaxweynaha ayaa dhawaan kulamo badan la yeelanayey siyaasyiinta, odayaasha, waxgaradka Soomaaliya si uu ugula tashto cidda uu u magacaabayo xilka Ra’iisul Wasaaraha oo ay dad badan ka war sugayaan.
Farmaajo ayaa si taxadar leh uga fikiraya cida uu Ra’iisul Wasaaraha u magacaabayo, waxaana maalmahan la gaarsiinayay dalabyo ka imaanaya beelaha Hawiye oo ku loolamaya xilka Ra’isulwasaaranimo oo ah shaqsiga qabto shaqada ugu badan ee dowladda.